Danab, Ma ciidan Qaran mise Calooshood u shaqaystayaal?...WQ: Dhuunkaal
Tuesday November 02, 2021 - 13:58:40
Dowlad walba oo aduunka ka jirta, ama maamul walba oo meel ka taliya, wuxuu leedayahay ciidamo isaga u gaar ah, kuwaas oo ka dhigan cudud uu ku maquuniyo cid walba oo cadaw ku ah ama ka hortimaada danaha istiraatiijiga ah ee ay dawladaas ama maamulkaasi leeyahay.
Marka laga hadlaayo ujeedooyinka ay dawladuhu u dhistaan ciidamada waxaa lagu sheegaa arimaha ay kamid yihiin:
1- In ay dalka ka difaacaan duullaan walba oo dibada uga yimaada
2- In ay ilaaliyaan xuduudaha barriga, badda iyo hawada ee dalka
3- In ay soo farageliyaan oo hay’adaha amniga gudaha ay caawiyaan xilliyada ay wajahayaan qalalaase ama kacdoono gudaha wadanka ah.
Hadaba, si dawlad walba ay u xaqiijiso madax banaanideeda iyo sugida ammaanka xuduudeheeda waxaa ay dadaal dheeri ah ku bixiyaan sidii ay u yeelan lahaayeen ciidamo u daacad ah, kuwaas oo hogaankooda, tababarkooda, dhaqaalahooda iyo maamulkoodaba ay dawladu leedahay.
Kahor burburkii dawladii Maxamad Siyaad Barre, Soomaaliya waxaa ay lahayd mid kamid ah ciidamadii ugu awoodda badnaa qaarada Afrika, kuwaas oo ku filnaa difaaca dhulka, badda iyo hawada Soomaaliya. Waxaa ay dagaallo taariikhda galay la galeen cadawgii Soomaaliya oo ay Itoobiya ugu weyneed, guulo wax ku ool ahna kasoo hooyeen. Amarka iyo talada ciidamadaas waxaa lahaa dawladii Soomaaliya, mana jirin wadan kale ama dawlad kale, xittaa hadii ay yihiin kuwo saaxiib la ahaa Soomaaliya, oo iyagu amar ku lahaa ciidamadaas.
Sida ay sheegaan dad badan oo aqoon u leh taariikhda, awoodda milatari ee ciidamadii Soomaaliya, gaar ahaan dagaalkii ay Soomaaliya la gashay Itoobiya sanadkii 1977 waxaa ay fajaciso ku noqotay dawladaha reer galbeedka ah. Waxaa ay rumaysan waayeen sidii ay ciidamadii Soomaalidu muddo kooban ugu jebiyeen ciidamadii xabashida, isla markaana qarka u istaageen inay qabsadaan Addis Abbaba.
Wixii xilligaas ka dambeeyay waxay wadamadii reer galbeedku go’aan ku gaareen in la burburiyo ciidamada Soomaaliya, arrinkaas oo ugu dambaytii hirglay, kaalina ay ka qaateen isla qaar kamid ah saraakiishii ciidamadaas oo iyagu dabadhilifyo u noqday wadamo shisheeye.
Maraykanka iyo la dagaalanka Islaamka.
Kadib burburkii dowladii kacaanka, Maraykanku wuxuu isku deyay inuu cudud milatari ku qabsado Soomaaliya, waxaa uu kumanaan ciidamo ah kasoo dejiyay Muqdisho waxayna ciidamadiisa iyo kuwii wadamada kale ee la socday isku ballaariyeen gobollada dalka. Balse dagaallo adag oo ay la galeen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan Muqdisho oo lagu jiiday maydadka askarta Maraykanka waxaa ay ku qasabtay inuu Madaxweynihii xilligaas Bill Kilinton ciidamadiisii Soomaaliya kala boxo.
Intaas kadib, wuxuu Maraykanku go’aansaday inuu dagaalka ka dhanka ah Islaamka ee uu ka wado Soomaaliya uu u adeegsado ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah, laga soo billaabo maleeshiyaatkii hogaamiye kooxeedyada oo uu hub iyo dhaqaale ku siin jiray dhibaatadii ay dalka ka wadeen ilaa laga soo gaaro ciidamada Afrikaanka ah oo uu isagu weli yahay wadanka ugu weyn ee taageerada siiya marka lagu daro wadamada Yurub iyo qaramada midoobay.
Maraykanku wuxuu tababar siiyay ciidamo Soomaali ah oo uu kasoo kala xushay maleeshiyaatka kala duwan ee Soomaalida ah. Waxaa uu ugu magac daray Danab. Dhamaan dhaqaalaha ku baxa tababarka ciidamadaas, noloshooda, hubkooda iyo mishaarkoodaba waxaa bixiya wasaarada gaashaandhigga ee Maraykanka.
Ciidamada Danab waxaa ay si toos ah amarka ugu qaataan saraakiisha Maraykanka ah ee AFRICOM. Waxay shaqadoodu tahay inay la dagaalamaan AlShabaab.
Dad badan ayaa aaminsanaa in Danab ay yihiin ciidamo ay leedahay dowlada Soomaaliya, balse dagaalkii dhawaan ka dhacay Guriceel ee dhexmaray meleeshiyaatka Suufiyada ah iyo maamulka Galmudug waxaa uu si cad banaanka usoo dhigay waxa ay Danab tahay iyo cidda ay u shaqeeyso.
Dagaalka Guriceel waxaa ku dhintay taliye sare oo ka tirsanaa ciidamada Danab kaas oo lagu magacaabi jiray Cabdiladiif Fayfle. Geeridiisa waxaa durbadiiba ka qayladhaamiyey Maraykanka, waxaana ay masuuliyiinta Maraykanku sheegeen inay ka fiirsan doonaan taageerada ay siiyaan Danab maadaama ay galeen dagaal aan ahayn midkii uu Maraykanku ugu talagalay, raaligana uga ahaa.
Qof walba oo Soomaali ah xaq buu u leeyahay inuu isweydiiyo, Danab, ma ciidan qaran baa, mise calooshood u shaqaystayaal?
Bal kawaran hadii uu dagaal dhexmaro Soomaaliya iyo mid kamid ah wadamada dariska ah, ciidamada Danab maka qaybgeli doonaan dagaalkaas mise Maraykanka ayay fasax ka sugayaan?
Hadii uu Maraykanku ka carooday in ciidamada Danab ay dagaal la galeen maleeshiyaad maxalli ah oo la dagaalamay dowlada Soomaaliya, ma wuxuu raali ka noqon doonaa in ciidamadaas ay dagaal la galaan dawlado kale oo cadaw ku ah Soomaaliya balse saaxiib la ah Maraykanka sida Kenya iyo Itoobiya?
Ilaa hadda ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxday maamulka Villa Soomaaliya oo ku aadan hadalka kasoo yeeray Maraykanka ee ah inaysan ogoleyn in ciidamada Danab ay ka qayb qaataan dagaallada ka dhanka ah ciddii aanan Al-Shabaab ahayn, si walba oo ay cadaw ugu tahay dowlada Soomaaliya, taas oo shaki gelinaysa inay dowladu garawsatay qaladkii ay gashay ee ahaa inay ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo ay dowlad kale leedahay u adeegsatay dagaal aanan shaqadooda ahayn, khasaaraha kasoo gaarayna uu gaarsiisanyahay in saraakiil waqti badan, tababar adag iyo dhaqaale xoogan lagu bixiyay ay ku dhinteen.
WQ: Maxamuud Cabdi Dhuunkaal
Guddoomiyaha Maxkamadda degmada Balcad iyo saraakiil ciidan oo isku day dil ka badbaaday.
Kumuu ahaa dagaalyahankii weerarka labaad ku qaaday saldhiggii ciidanka Burundi ee Ceelbaraf [dhageyso].
Taliyaha Ciidanka Police-ka Gobolka Banaadir oo Qarax Xoogan Lala Eegtay.
Doorashada Soomaaliya, dhib mise dheef?